विष्णु माझीलाई किन खोज्यो प्रहरीले ? – Pahilo Page
विष्णु माझीलाई किन खोज्यो प्रहरीले ?
२८ भाद्र २०७८, सोमबार १३:४७ 172 पटक हेरिएको
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले चर्चित लोकगायिका विष्णु माझीको अवस्थाबारे खोजी गर्न आग्रह गरेपछि नेपाल प्रहरी माझीको खोजीमा जुटेको छ ।
माझीको पछिल्लो गीत ‘चरी जेलैमा’ सुपरहिट भएसँगै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमाथि नै प्रश्न उठाउँदै सामाजिक सञ्जालमा माझीको विषयमा विभिन्न चर्चा हुँदै आएका छन् ।
आयोगले आइतबार माझीको माइती जिल्ला स्याङ्जास्थित जिल्ला प्रशासन र प्रहरी कार्यालयहरुलाई उनको अवस्था बुझ्न मौखिक निर्देशन दिएको थियो । सोही अनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाले माझीको अवस्थाका बारे बुझ्न माइतीमा प्रहरी टोली पठाएको थियो ।
माझीको खोजीमा भने प्रहरी पूर्ण रुपमा जुटिनसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाले बताएकाे छ । किनकी उनको निजी जीवनबारे चासो राख्नु उपर्युक्त नभएको प्रहरीको भनाई छ ।
आयोगको मौखिक निर्देशनपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाका प्रमुख एवं एसपी होविन्द्र बोगटीले आइतबार गायिका माझीको माइतीघरमा स्थाानीय प्रहरी टोली पठाएको स्वीकारेका छन् । माझीको अवस्थाबारे बुझ्न एक वर्ष अगाडि नै मानवअधिकार आयोगबाट पत्र आएको एसपी बोगटीले बताए ।
अहिले गीत एकाएक हिट भएपछि मानवअधिकार आयोगले चासो देखाउनु र प्रहरीले खोजी गर्नुलाई अनौठोको रुपमा लिइएको छ ।
माझीलाई उनकै श्रीमान सुन्दरमणि अधिकारीले लुकाएर राखेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा चर्चा÷परिचर्चा भएपनि त्यसको आधिकारीक पुष्टि हुन सकेको छैन । माझीले नै आफ्नो निजी जीवनबारे टिकाटिप्पणी नगर्न पहिले नै आग्रह गरेकी थिइन् ।
माझीका श्रीमान सुन्दरमणिले लेखेका र संगीत भरेको गीत चरी जेलैमा कतै माझीकै जीवनमा त आधारित छैन ? भन्ने पश्न पनि उठिरहेका छन् ।